Oromooti Seerota Loogummaa Sanyiitiin Hiraarsamaa Jiru!!
Date: June 26, 2010Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, Waxabajjii 26, 2010) Mooutmmaan Itoophiyaa seera loogummaa sanyii irratti hundaa’een Oromoota hidhee hiraarsaa fi gidirsaa akka jiru saaxilame.
Oduun gidduu kana Madda Oduu ABO/MOAn/ tamsaasame akka saaxiletti, manneen hidhaa Wayyaanee keessatti qajeelfamooti haaraa sanyummaa irratti hundaa’anii bahan ilmaan Oromoo manneen hidhaa keessatti gidirsaa fi hiraarsaa jiran.
Manneen hidhaa Qaallittii, Zuwaayii fi Shawaa Roobit irraa oduun madda Oduu ABO/MOA/ gahe akka ibsetti, yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo lama fi sanaa ol ta’anii akka waliin hindeemne, akka waliin nyaannee fi akka waliin hinmaryanne kan taasisaa jiruudha.
Akka seeraa fi qajeelfama haaraa bahe kanaatti ilmaan Oromoo seeraa fi qajeelfama kunneen cabsuun waliin haasa’anii fi waliin deeman yookaan waliin nyaatan gaaffii tokko malee manneen dukkaanaa fi qabbanaawaatti darbamuun akka hidhamanii adabaman nitaasisamu.
Kana malees, yeroo murtaa’eef firaafi abukaatota isaaniin akka wal hinargine uggurri akka isaan irra kaayamu, gaaffii tokko malee manneen fincaanii jala akka ciibsaman akeekkachiisti himamee jira. Seeraa fi qajeelfamoota kana akka hojii irra oolchaniif immoo hidhamtooti amanamoofi lammiin tigiroota ta’an filamanii akka mooraa mooraa keessatti ramadaman beekamee jira.
Haaluma walfakkaatuun, ilmaan Oromoo manneen hidhaa Wayyaanee keessatti hiraarfamanii yeroo hiikamuu jala gahanitti sababa seera shororkeessummaatiin Oromooti callaan akka mirga seeraan hidhaan irraa hir’ifamuu hinarganne godhamaa jiraachuun gabaafame.
Maddi Oduu ABO odeessa manneen hidhaa adda addaa keessaa argatee mirkaneesseen ilmaan Oromoo shantamaa ol ta’an yeroo ammaa mirga seeraan hidhaan irraa hir’ifamuu dhoggamanii mana hidhaa keessatti akka hiraarfaman godhamee jira.
Akka kanaan mana hidhaa Qaallittii keessaa Oromooti 15, mana hidhaa Zuwaay keessaa oromooti 20, mana hidhaa Shawaa Roobiit keessaa immoo Oromooti 18 mirga hidhaan irraa hir’ifamuu kan Afaan Habashaan ‘amakiroo’ jedhamu dhoowwatamanii jiru.
“Itoophiyaan mana hidhaa ilmaan sabootaa ti,” kan jedhan hayyuun seeraa maqaa isaanii ibsuu hinbarbaanne tokko akka MOAf yaada kennaitti, “ yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoo callaa irratti loogiin sanyummaa irratti hundaa’ee ifaafi dhoksaan labsamee jira,” jedhanii jiru.
“Akka seeraatti namni hidhamee yeroo hidhaa isaa keessaa harka caalu fixe gorfamee hiikamuuf mirga guutuu qaba,” kan jedhan hayyuun seeraa kun,”Oromoota callaa adda baasanii mirga kana dhoowwachuun garuu loogiin sanyummaa irratti hundaa’e jiraachuu mirkaneessa; loogiin kun kan harka lafa jalaa qofaan raawwatamaa jiru otuu hinta’iin ifaan labsamaa akka jiru illee mirkaneessa,” jedhanii jiru.
Ilmaan Oromoo yeroo dhiyoo kana murtiin du’aa fi adabiin itti murame keessaa aaddee Worqinaash Guutee ibsa gabaasaa MOAf kennaniin Caamsaa bara 2008 qabamanii hidhaa baatiilee saddeetii booda wabiin gadhiifamanii akka jiran ibsanii, namoonni duuti itti murame hiyyeeyyii mana namaa keessaa kanneen hojjetaa jiraatan ta’uu raga bahanii jiru. “Ilmaan Oromoo kunneen irratti murtiin kenname kan dabaati; isaan waan akkasii geggeessuuf karooraa fi dandeetii isaas kanneen qaban miti,” jedhanii jiru Aadde Warqinash gaaffiifi deebii MOA waliin taasisan keessatti.
“Namoota murtiin irratti dabre keessaa Aaddee Urgee Abbabaa, abbaan-manaa isaanii obbo Girmaanis mana hidhaa waan jiraniif, mucaa isaanii umuriin waggaa sadii waliin hidhamanii jiru,” kan jedhan Aadde Warqinash, “Oromoon biyya isaa keessatti seera loogii sanyummaan guutameen hiraarfamaa jira,” jedhanii jiru.
Sirni Wayyaanee yeroo ammaa kanas ilmaan Oromoo hedduu mana hidhaatti ukkaamsee murtii seerloogii sanyiitiin adabuuf akka jiru illee beekamaadha.
Yeroo ammaa kanas ilmaan Oromoo 25,000 ol ta’an manneen hidhaa Wayyaanee adda addaa keessatti hiraarfamaa jiran; isaan keessaa ilmaan Oromoo salgan: Ismaa’el Ahimad Muudaa, Jamaal Musxafaa, Fissahaa Birraasaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Masfin Abbabaa, Urgee Abbabaa, Dirribee Ittaanaa, Dagguu Ittaanaa fi Daani’eel Jaallataa murtiin du’aa itti kennamee jira; ilmaan Oromoo 50 ol ta’an immoo adabbiin umurii guutuu daanyota lammiin Tigiree ta’aniin itti kennamee akka jiru beekamaadha.
Previous Previous post: Hard roads to freedom in Noble Park
Next Next post: Anti Meles Zenawi Protesters in Canada